Nhau - Chikwata Chekuvaka Basa.
Kuti usimbise chido chevashandi chebasa, simbisa kutaurirana kwakanaka, kuvimbana, kubatana pamwe nekubatana pakati pevashandi, kukudziridza kuziva timu, kusimudzira pfungwa yevashandi yekuva nebasa, uye kuratidza maitiro eSanniu Company, musi waMay 29, 2021, vese vashandi veYantai Sanniu Import uye Export Co, Ltd. vakapinda muchiitiko chekuvaka timu.
Na8 o 'wachi mangwanani aMay 29, tese takatora bhazi kuenda kunzvimbo yemhando yepamusoro muWeihai kunodzidziswa zvekunze. Kunze kwekusunganidzwa kudzidziswa seti yerovedzo maitiro ekuumba iyo timu simba, kusimudzira kukura kwesangano, uye kugara uchiwedzera kukosha kune iwe pachako. Iyo seti yekunze kwekuziva ruzivo rwekufananidza yakanyanya kugadzirirwa yezvazvino timu kuvaka.
Pamberi pekudzidziswa kwepamutemo, murairidzi anotanga kuburikidza nenhamba yavo kuti apedze basa reboka. Zvino nhengo yega yega yechikwata inosarudza kaputeni, uye vachitungamirwa nemutungamiriri, vanokurukura zita reboka ravo, chiratidzo chechikwata uye sirogani. Tine mapoka maviri, maorenji Tigers nebhuruu maDragoni. Zvino pasi pekutungamirwa nemurairidzi, nhengo dzese dzechikwata dzakapinda mumakwikwi nemitambo, senge yeTrust Back Fell, Drum Life, Escape.Wzvese nemamwe mapurojekiti. Isu tese takaendesa kumberi mweya wekushanda nesimba, kutsungirira, kusamborega, uye kupedzisa ese akaomesa mapurojekiti. Manheru, taive nebhengi tichipisa nemoto wemusasa, tichinwa, tichiimba nekutamba, uye tichigovana zviitiko zvedu nemanzwiro edu.
Zuva rerwendo runofadza, kunyange uchinzwa kuneta zvakanyanya, asi moyo wemunhu wese unofara kwazvo. Kuburikidza neichi chiitiko cheboka, nhengo dzechikwata dzine manzwiro mazhinji: chekutanga, kukosha kwechikwata kunozviratidza, kana pasina nhengo dzechikwata chekudyidzana, kuita pamwe, zvibodzwa zvakawanda zvinonetsa kuzadzisa; Chechipiri, kuzvitenderedza ndiyo kiyi yekubudirira, matambudziko ndeechokwadi, vanozvikunda, vape kutamba kune kugona kukuru kwenhengo yega yega yechikwata inhanho yekutanga yekubudirira.
Chechitatu, kutaurirana kwechikwata kwakakosha, kutaurirana kwakawanda, kugovana zvakanyanya, mazano akanaka uye mazano zvinogona kuvandudzwa, uye pakupedzisira zvinotibatsira kune rimwe divi rekukunda. Paunosiya nzvimbo yekudzidzira uye wodzokera kune kwaunojaira nzvimbo yekushanda, isu tinotenda kuti chero bedzi tikapa kutamba kuzere kuchikwata mweya wekuvimbana nekubata basa rega rega sekushomeka kwese mukudzidzisa, hapazove nedambudziko ratisingakwanise kukunda uye hapana dambudziko ratisingakwanise kugadzirisa!
Ladyfinger Cookie, Hawthorn Strip, Mutsva Bean Curd Stick, Soy Sauce Mapaketi, Vana Mabhisikiti, Kudya Nzungu Dzakarungwa,